စိတ်တ္တဇ ( ၂ )
အဆိပ်ဆူးလို အရိုးထိရူးတယ် ။ ။
လောင်စာမဲ့ယဉ် တောမရှိတဲ့သစ်ပင် ။ ။
အတ္တဟိတတွေ များများလာခဲ့ ။ ။
သုညဟာ " ၀ " ဖြစ်မလာတဲ့အခါ
ဦးနှောက်ပျက်ရုံသာသာ ။ ။
မာယာဟာ လောကခရီးသွားရဲ့ အိတ်ဆောင်တစ်လုံးလား ။ ။
ကျောက်ခေတ်ရဲ့ ညတစ်ညတောင် အယောင်ဆောင်မှုတွေနဲ့လှလို့ ။ ။
ဘုံတစ်ခွင်မှာ အယောင်ဆောင်လသာတယ် ။ ။
သံသရာမှာ ငါတို့....အယောင်ဆောင်ကြဦးမလား ။ ။
လွတ်ကျသွားခဲ့တာ မာန...အမေ ။ ။
ရင်သွေးအနှစ်နဲ့ ထုဆစ်တယ်..အမေ ။ ။
ကျွန်တော်သွေးမကြောင်ခဲ့ဘူး...အမေ ။ ။
ကြောက်တတ်နေခဲ့ပြီ...အမေ ။ ။
ရှာဖွေနေခဲ့မိပြီ အမေ....။ ။
ခန္ဓာကို ငုံတဲ့သင်္ခါရနဲ့
အနတ္တစစ်တလင်းမှာ ထိုးစစ်ပြင်းပြင်းဆင်ကြပြီ ။ ။
ပရဟိတ ပျောက်နေခဲ့ပြီ အမေ...။ ။
ရေငတ်သူတွေ များနေကြပြီ အမေ...။ ။
ငှက်တစ်သောင်းကော နားနိုင်ပါ့မလား ။ ။
သာခန်းဆင်ဖို့ ဂွင်တစ်ခုပါ အမေ...။ ။
ဒီဘ၀ လူမပီသတော့ဘူး အမေ...။ ။
ငါ့စောင်းကြိုးတွေကို ဖြေလျော့ပစ်လိုက်တယ် ။ ။
ညတွေကလည်း နက်သထက်နက်ခဲ့ပြီ ။ ။
ရင်ဘတ်မှာ တံဆိပ်ကပ်ခဲ့တယ် ။ ။
အနုံညတရ စိတ်အဟာရကိုလဲ သောက်သုံးနေတတ်ရဲ့ ။ ။
ငါကိုယ်တိုင် မသိခဲ့လိုက်ဘူး ။ ။
စွန့်ခွာခံလိုက်ရတဲ့ သစ်ပင်ရဲ့ ဖြစ်အင်က
ပိုလွမ်းမောစရာကောင်းပါတယ် ။ ။
ကျိုးပျက်ကြေမွသွားတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်သစ်ရဲ့ သဟဇာတမှာ
သဘာဝကျကျ ဖျက်ဆီးခံရတဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို
ငါ...မဉ္ဖူသကနဲ့တွေ့ တယ် ။ ။
ခင်မင်မှုတွေ ဖက်လှဲတကင်းဖြစ်သွားခဲ့တာ ။ ။
အပြုံးတွေနဲ့လည်း ဆော့ခဲ့ကြတယ် ။ ။
မဉ္ဖူသကနဲ့ ရနံ့တွေကနေကြတယ် ။ ။
မှတ်ချက်။ ။အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းအတွက် အမှတ်တရလက်ဆောင်ရေးပေးခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးပါ။
ချည်နှောင်မှုတွေ ရှိတယ် ။ ။
မမြဲမြံမှုတွေ ရှိတယ် ။ ။
လွတ်မြောက်မှုတွေ ရှိနေတတ်ပြန်တယ် ။ ။
ဘ၀ဆိုတာ စိတ်တိုင်းကျထုဆစ်ထားတဲ့ ပန်းပုမှ မဟုတ်ဘဲ
အထင်ကရတွေ အတွက်နဲ့ တောက်ပခဲ့သလို
အထင်ကရတွေ အတွက်နဲ့ပဲ ပြာကျခဲ့ပြန်သတဲ့
ငါတို့ထံကိုဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ရောက်လာဦးမယ် ။ ။
မျှော်လင့်ခြင်းတစ်သိုက် ပြိုက်ကနဲကြွေကျတယ် ။ ။
အမုန်းနင့်နင့်တွေ ရင်ထဲထည့်ပစ်ခဲ့တယ် ။ ။
ကြည့်သူမရှိ လက်မှတ်မပါ ကြေငြာစာတမ်းမထိုး
နင့်နဲခြင်းတွေနဲ့ ပိနေခဲ့တယ် ။ ။
ငါ သတ်လိုက်တယ် ။ ။
မရှိခြင်းက ပိပိကျလာခဲ့။ ။
အထီးကျန်ခြင်းက ရဲရဲတင်းတင်းညှဉ်းဆဲနေပေါ့ ။ ။
ရင်ဘတ်တစ်နေရာက တဆစ်ဆစ်နာလာခဲ့ပြန်ပြီ ။ ။
စိတ်ဆိုတဲ့နံရံမှာ အလင်းအမှန်မခတော့ဘူး ။ ။
လျှာကိုဂူသွင်းပစ်လိုက်တယ် ။ ။
ငါ့ကိုယ်ငါ စိတ်နာလို့မဆုံးဘူး ။ ။
အရှိုက်ကိုထိုးတဲ့ လက်သီးတစ်လုံးပေါ့ ။ ။
စိတ်တွေအားလုံး တိတ်ဆိတ်စွာအိပ်တန်းတက်ခဲ့။ ။
လျော့လျဲခြင်းမှာဘဲ အကျွမ်းတ၀င် ။ ။
ငါက ပိုးဖလံအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ရမတဲ့လေ ။ ။
ငါကိုယ်တိုင် ပွဲခင်းပစ်လိုက်တယ် ။ ။
စိတ်လိုလက်ရ ငါမိုက်ပြလိုက်ဦးမယ် ။ ။
ငါ့ကိုသောက်ခွင့်ပြုပါ မာယာ ။ ။
ဘ၀ရဲ့တောနက်ထဲ ရမ္မက်တွေပဲကြွေကြွေကျနေခဲ့ ။ ။
ရင်ကွဲနာဆိုတာ ရာဇ၀င်ထဲကဒဏ္ဍာရီသာသာ ။ ။
အချစ်ဟာလည်း ဒဏ်ရာတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ် ။ ။
မင်းအတွက် လက်ဆောင်ပို့လိုက်မယ် ။ ။
အခုဘ၀က ရှေ့သွားနောက်လိုက်မညီတော့ဘူး ။ ။
အတိတ်ချိုချိုတွေတောင် ဆေးဘက်မ၀င်တော့ ။ ။
အမှတ်တရတွေထဲမှာပဲ တခုတ်တရရူးသွပ်နေပေါ့ ။ ။
ငါ့ရင်ခွင်ရွက်တိုင်ထိပ်မှာ အကြင်နာတံဆိပ်ကပ်နှိပ်ခွင့်မရှိတော့လို့ ။ ။
ဝေဒနာသာ အောင်ပွဲခံလို့ပေါ့ ။ ။
ဘာရာဇ၀င်မှ မရေးချင်တော့ဘူး ။ ။
တပ်တပ်မက်မက် ချဉ်ခြင်းတက်ခဲ့တဲ့ နေ့ရက်တွေ
အခု ငါ့ရင်ခုန်သံကို အဆိပ်သုတ်နေကြပြီ ။ ။
အဲဒီ့ဘ၀ရဲ့ ညတွေမှာ အလှဆိုတာ မပါဘူး ။ ။
ငါ့ရင်ခွင်မြို့ ရိုးရဲ့ စကားလုံးကြီးစိုးရာသီမှာ
ငါ့ခန္ဓာကို ကြဲဖြန့်ရင်း နှလုံးသွေးအစစ်ကို
ယဇ်တင်ပူဇော်မယ် ။ ။
ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သုညမိုးတို့ထစ်ချုန်းလို့ ။ ။
မျက်ရည်သာ ပင်လယ်ဖြစ်ခဲ့တယ် ။ ။
ဒဏ်ရာတွေနဲ့ လဲကျနေခဲ့ပြီ ။ ။
ညက တိုးတိတ်ရီဝေစွာကခုန် ။ ။
စိုးရွံ့ မှုတွေနဲ့ တွန်ကြူးနေတဲ့လေတိုးသံမှာ
ပျောက်သွားတဲ့ ကြယ်တစ်လုံးကိုသာရှာဖွေနေခဲ့မိတယ် ။ ။
လက သူ့ကိုယ်သူအမိုက်မဲဆုံး ပွတ်တိုက်ခြယ်သချင်နေလို့ ။ ။
ဘယ်မုဆိုးမှလည်း လူရာမ၀င်တော့ဘူးပေါ့ ။ ။
ခြေပစ်လက်ပစ် အိပ်စက်နေလိုက်မိတယ် ။ ။
တပ်မက်မှုနဲ့ နာကြင်တယ် ။ ။
အချစ်နဲ့ သစ္စာဟာ ရွှေမန်းသဘင်နဲ့မော်တော်ဘုတ်နာမည်သာသာ...။
တစ်ဒင်္ဂ ဖြတ်ပြေးသွားတဲ့ အပြုံးအောက်မှာ
ငါ့လက်ထဲမှာ အသည်းဘယ်လောက်ကွဲခဲ့တာကို ဂုဏ်ယူလိုက်ကြ
မျက်နှာဖုံးတွေ အမျိုးမျိုးနဲ့ ပွဲခံလိုက်ကြ
ဘ၀ကို မျဉ်းဖြောင့်ဆန်ဆန်ခြယ်သမိလိုက်ရဲ့ ။ ။
အတိတ် ပစ္စုပန် အနာဂါတ်
ပြိုကျပျက်သုဉ်းလို့ ...။ ။
ငါ့ရင်နဲ့ နာခံခွင့်ပြုပါ ။ ။
အံချော်နေတဲ့ ဆန္ဒတစ်ခုလေလား ။ ။
တံခါးက တံခါးတွေကို အားပေးခဲ့တယ်
တံခါးက တံခါးပီသအောင် နေထိုင်ခဲ့တယ်
တံခါးရဲ့ ရာဇ၀င်ဖြစ်လာခဲ့တယ် ။ ။
ညကို အသက်သွင်းခဲ့ပြန်ပြီ ။ ။
လူတိုင်းရဲ့ ရင်မှာတည်တယ် ။ ။
အထက်တွင်အသုံးပြုထားသောပုံကို www.flickr.comမှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
နာမည်လေးက ခပ်ဆန်းဆန်း။ တစ်လုံးတည်းမှည့်ထားတဲ့နာမည်လေး။
ကြွေမို့လို့ဘဲ ချွေခဲ့တာလား ။ ဒါမှမဟုတ်......
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကဘဲ ကြွေခဲ့တာလား ကြွေရယ်..။
အခုတော့လည်း ရင်မှာအဖြေမရှိ ။ မေးမိတဲ့ကိုယ့်အသဲ(သည်း)ကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခွဲလိုက်ချင်ပြီ ကြွေ..။
အခုအချိန်ဆိုရင် မင်းဘယ်ရောက်နေမလဲကြွေ။ မင်းဘာတွေလုပ်နေမလဲ။ ရင်ခွင်သစ်မှာပျော်ရွှင်နေပြီလား။
ကိုယ် ဒီအတွေးတွေနဲ့ စိတ္တဇဖြစ်နေရပြီကြွေ။ ကိုယ်လေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အရမ်းမုန်းမိတယ်ကြွေ။
ဒီအချိန်ဆို မင်းရင်ခွင်မှာ လသာနေလောက်ပါတယ်ကြွေ။
ကိုယ့် ရင်ခွင် ခြောက်ကပ်ကပ်မှာသာ နွေရာသီတွေ အဆက်မပြတ်လည်ပတ်နေတာပါ ကြွေရယ်။
ကမ္ဘာ လှည့်ပတ်တဲ့လမ်းကြောင်းကို ပြောင်းနိုင်တဲ့အစွမ်းတွေများရှိခဲ့ရင် ကြွေရယ်....
ကိုယ်တို့ ပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့ နေ့ရက်တွေထဲမှာဘဲ ကျောက်ချထားလိုက်ချင်တယ်ကြွေ...။
အရာရာမှာ လူကြီးဆန်စမ်းပါလို့ ကိုယ့်ကို ဆရာလုပ်ခဲ့တဲ့ မင်းရဲ့ဟန်ပန်..။
ဟဲ့ မိန်းကလေးဆိုပြီး မီးဖိုချောင်ထဲက မထွက်စတမ်းနေရမှာလား ငါဒါမျိုးတွေဝါသနာမပါဘူးဆိုတဲ့ မင်းရဲ့ဒသနတွေ..။
ပြီးတော့....ပြီးတော့......မင်းနဲ့ ပတ်သက်သမျှ အရာရာပါကြွေ...။
တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ ဖူးပွင့်ခွင့် မရလိုက်တဲ့ ပန်းကလေးတစ်ပွင့်....
ဘယ်တော့မှလည်း ထပ်မပွင့်နိုင်တော့သလို ဘယ်တော့မှလည်း ပြန်လည်မရှင်သန်နိုင်လောက်အောင်ပါဘဲ
ကြွေ.....ရေ ငါ့နွေတွေ ငိုနေပါပြီကွာ...။
နင်ဟာ ငါ့ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော ယောကျာ်းလေးသူငယ်ချင်းပါ.....။
ဖြေးညှင်းစွာ ကျီစယ်တိုက်ခတ်တတ်တဲ့ လေပြေတွေဆော့ကစားလို့ လွင့်ပျံ့နေတဲ့ မင်းဆံနွယ်လေးတွေကအစ
မင်းဖ၀ါးနုနုလေးတွေ သွေးခြေမဥအောင် ကာကွယ်ပေးတတ်တဲ့ ကတ္တီပါဆိုတဲ့ မင်းစီးတဲ့ ဖိနပ်လေးအဆုံး...
ကိုယ့်စိတ်နှလုံးကလေ အရာရာကြွေပါ ကြွေ...။
မှတ်မိနေပါသေးတယ် ကြွေ..။ ကိုယ်မှတ်မိနေပါသေးတယ်။
ကိုယ်ရဲ့ ကြိူတင်ပြင်ဆင်မှုတွေက ကိုယ့်ကိုကျဆုံးစေခဲ့မယ်ဆိုတာ ကိုယ်ကြိူသိခဲ့ရင်...
မင်းနဲ့ပတ်သက်ရင် ကိုယ့်ပါးစပ်တွေက အာစေးထည့်ခံထားရသလိုပါဘဲကြွေ..။
မဟုတ်ဘူးကြွေ မဟုတ်ဘူး ။ ဒါဟာ ကံကြမ္မာလား။ မရေရာတဲ့အတွေးတွေနဲ့ပါဘဲ ကြွေ..။
တကယ်ဆို မင်းမှ မသိခဲ့တာဘဲ ကြွေ...။
ကိုယ့်ရဲ့ မစူးစမ်းမှုတွေကြောင့်ဘဲလား ။ ကိုယ်သတ္တိတွေ နည်းခဲ့လို့လားကြွေ ။
ဘ၀မှာ အကြိမ်ကြိမ်အောင်မြင်ခဲ့မှုတွေက တစ်ကြိမ်တစ်ခါဆုံးရှုံးရတဲ့အဖြစ်ကို မဖုံးလွှမ်းနိုင်ပါဘူးကြွေရယ်..။
အမြတ်နိုးဆုံးနှလုံးတစ်စုံကွယ်ပျောက်ခဲ့ရတဲ့ ကိုယ့်အဖြစ်ဟာ ရှိသမျှဘ၀လက်ကျန်မှာ အကြိမ်ကြိမ်အဖန်ဖန် လဲပြိုနေဦးမှာပါကြွေ..။
ဒါဟာ အမှားတွေဆိုရင် ဒီအမှားတွေကိုဘဲ ရာသက်ပန်ကိုးကွယ်သွားလိုက်တော့မယ် ကြွေ...
ဟင် ဟုတ်လား ဒါဆို နင်အရင်ပြောကြွေ ။
ရပါတယ် နင်ပြောစရာရှိတာ အရင်ပြောပါ။
ငါဘယ်တုန်းကများ နင့်ကို ဦးစားမပေးခဲ့ဘူးလို့လဲ ကြွေ..။နင်အရင်ပြောပါ။
ငါ စကာင်္ပူသွားတော့မယ် မင်းခက်။
ဟိုမှာ ကိုကိုက အစစအရာရာ အားလုံးပြင်ဆင်ထားပြီးပြီဟ။
နင်အံ့သြနေလား ။ ငါတို့ဒီအကြောင်းတွေကို ဘယ်သူမှ မပြောပြထားဘူးဟ။
ငါဒီကို ပြောင်းမလာခင် တစ်နှစ်လောက်အလိုကမှ ကိုကိုက စကာင်္ပူကို ထွက်သွားတာလေ။
သူအစစအရာရာ အခြေတကျပြင်ဆင်ပြီးတာနဲ့ ငါ့ကိုလှမ်းခေါ်မယ် ပြောထားတာလေ။
ပြီးရင် ငါတို့ဟိုမှာဘဲ လက်ထပ်ကျမယ်။
မာမီနဲ့ ဒယ်ဒီကတော့ လက်ထပ်တော့မှဘဲ လိုက်လာကြမှာပေါ့။
ငါကတော့ အရင်လိုက်သွားမယ်လေ။ဟိုမှာ အလုပ်ရှာပြီး အရင်လုပ်မယ်။
ပြီးတော့မှ လက်ထပ်မယ်။ ငါအရမ်းပျော်နေတယ်ဟ သိလားမင်းခက်။
ကိုကိုနဲ့ငါ ခွဲနေရတာ သုံးနှစ်နီးပါးရှိပြီလေ။
လေလှိုင်းထဲက အသံလေးတွေနဲ့ဘဲ အလွမ်းဖြေနေရတာဟ။
အခုတော့ ငါတို့ ခွဲမနေရတော့ဘူးပေါ့ ။ နင်ကော ၀မ်းမသာဘူးလား မင်းခက်။
ကရားရေလွှတ်တတွတ်တွတ်ပြောနေတဲ့ ကြွေ့ မျက်နှာမှာ ၀မ်းသာမှုတွေ၊ ပျော်ရွှင်မှုတွေက အတိုင်းသား...။
ကိုယ် ၀မ်းသာပေးနေရမှာလား ကြွေ။ ကိုယ်ရည်ရွယ်ခဲ့တဲ့ စကားတွေ။ ကိုယ်မွေးခဲ့တဲ့အားတွေ..။
ကြွေရေ အဟောသိကံဇာတ်မှာ ကိုယ့်အလွမ်းရက်တွေ ဘယ်လောက်များခါးနေလိုက်မလဲကွာ...။
ဒီအကြောင်းတွေကို ကိုယ်ဘာမှ မသိခဲ့ရပါလားကြွေရယ်..။
ဘာကြောင့်လဲကြွေ..။ ဘာကြောင့်များလဲ...။ဒါဟာ ဖုံးကွယ်စရာကိစ္စတစ်ခုလားကြွေ..။
ကိုယ့်ရင်ထဲက မေတ္တာပန်းတွေ အခု ဝေဒနာလေနီကြမ်းတွေကြားမှာ သွက်သွက်ခါယမ်းနေကြပြီကြွေ...။
ဟဲ့....မင်းခက် နင်ဘာဖြစ်နေတာလဲ...။ငါမေးနေတာ ဖြေဦးလေ။ နင်ကောဝမ်းမသာဘူးလားလို့ ။
ဟဲ့...ဒါကနောက်စရာမှ မဟုတ်တာ။ ဘာလဲ နင်က မယုံဘူးလား ။
ရုတ်တရက်ဆိုတော့ အံသြသွားတာပါ။ ဒီအကြောင်းတွေကို ငါလုံးဝမသိရပါလားကြွေ..။
မသိဆို ငါတို့က ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောတာကို..။အရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ အားလုံးသိကြတယ်လေ။
ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ ကိုကိုထွက်သွားပြီးမှ ပြောင်းလာတာဆိုတော့ မသိကြတာပါ..။
ပြီးတော့ ပြောဖို့လည်း မလိုအပ်ဘူးထင်လို့လေ။
နင်ငါ့ကိုတော့ ပြောသင့်တယ်ထင်တယ် ကြွေ..။
အေးလေ နင့်ကိုငါအခုပြောတာဘဲ။ ဘာလဲ နင်က အခုမှ သိရလို့စိတ်ဆိုးနေတာလား။
ငါတို့က မသေချာသေးဘဲနဲ့ ဘာမှ မပြောချင်လို့ပါဟာ။
ငါကမိန်းကလေးလေ။ တစ်စုံတစ်ခု လွဲချော်သွားရင်။ ဒါကြောင့်မို့ပါဟာ။
ဟဲ့...နင်ငါ့ကို လေယဉ်ကွင်းလိုက်ပို့မှာလား....။ သန်ဘက်ခါ မနက်ဆယ်နာရီခွဲဖလိုက်နဲ့ ။
အေးလေရပါတယ်ဟာ။ နင်လည်း နင့်ကိစ္စနဲ့ နင်ရှိမှာပေါ့။ မအားရင်လည်း လိုက်မပို့ပါနဲ့ဟာ။
ဒါနဲ့ နင်ပြောစရာရှိတယ်ဆိုတာ ဘာလဲ ပြောလေ..။
ကိုယ့်မှာ ဘာများပြောပိုင်ခွင့် ရှိတော့မှာလဲကြွေ...။
ဒါဟာ ကိုယ့်အတွက် ကြွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကံကြမ္မာလားကြွေ..။
မတိုက်ရခင်ကတည်းက ရှုံးနိမ့်သွားခဲ့ရတဲ့ စစ်ပွဲမှာမှ ကိုယ်က စစ်သူကြီးဖြစ်ခဲ့ရသူပါကြွေရယ်...။
အခုတော့ ကိုယ့်ရင်မြို့ ပျက်မှာ ဝေဒနာတွေသာ မတ်တပ်ရပ်နေကြတယ်ကြွေ...။
ကိုယ်ဘာမှ မပြောပါရစေနဲ့တော့ကြွေ။ ကိုယ့်ရင်ဘတ်တွေ အသံမထွက်တတ်တော့လို့ပါ...။
ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူးဟာ....။ ငါသွားတော့မယ်...။
ခွင့်ပြုပါတော့ ကြွေ...။ ကိုယ်ဘယ်လိုမှ ရပ်တည်နိုင်စွမ်းမရှိတော့လို့ပါ။
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ကတော့ ပို့ဆောင်သူတွေ ပြန်လည်ရောက်ရှိသူတွေ ထွက်ခွာသူတွေနဲ့
ကိုယ်လေ ကြွေ့မျက်နှာလေးကို နောက်ဆုံးမြင်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ လေယာဉ်ကွင်းကို တိတ်တဆိတ်လိုက်လာမိတာပါကြွေ..။
ကြွေရယ်....ဒီနေ့ မင်းအရမ်းလှနေပါတယ်ကြွေ။ ပြုံးပျော်နေတဲ့ မင်းရဲ့ မျက်နှာလေး ။
ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင်တော့အောင် မင်းမျက်နှာလေးကို ကိုယ့်နှလုံးအိမ်မှာ ခတ်နှိပ်လိုက်ပါတယ်ကြွေ...။
ကိုယ်လေ...မင်းကို ဘယ်တော့မှ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိတော့ပေမယ့် ကိုယ်မင်းကို ထာဝရချစ်နေပါတယ်ကြွေ..။
ဒီအဖြစ်တွေဟာ အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် ကိုယ်လေ မင်းကို ချစ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ဘဲ ထာဝရအိပ်နေပါ့မယ်ကြွေ..။
တကယ်တော့ဒီနေ့ဟာ မင်းအပျော်ဆုံးနေ့တစ်နေ့ဖြစ်မှာပါ ကြွေ..။
ကိုယ့်နှလုံးအိမ်ဟာလည်း သွေးစိမ်းရှင်ရှင်ထွက်တဲ့နေပေါ့ ကြွေရယ်...။
ကိုယ်သိပ်ချစ်ရတဲ့ မိန်းကလေး ကိုယ့်ကို ခွဲခွာသွားမှာကို ကိုယ်တိတ်တိတ်လေး ကြည့်နေရတဲ့အဖြစ်ပါကြွေ..။
မင်းကော ကိုယ့်ကို သတိမှ ရပါ့မလားကြွေ...။
မင်းမျက်နှာလေးကို ငေးကြည့်နေရင်း ကိုယ့် နှလုံးသားတွေ တစ်စစပဲ့ကျနေမှန်း.......
မင်းရဲ့ အပြုံးလက်လက်လေးတွေက ကိုယ့်မျက်ဝန်းက မျက်ရည်တွေကို ဖျောက်ဖျက်ပစ်နိုင်မှာလားကြွေ..
ကိုယ့်ရင်ကိုယ် အဆိပ်ခတ်နေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ဓါတ်အလုံးစုံမှာ....
ကြွေရယ်....မင်းအတွက် အချစ်ဓါတ်တွေအပြည့်ပါဘဲ ကွာ....
ကိုယ့်ဝေဒနာတွေကို ကိုယ်တူးဖော်နေ့ရတဲ့ ကမ္ဘာပျက်နေ့ရက်တွေမှာ....
ကြွေရယ်.....ကိုယ့်ကို တစ်ချက်လောက် သတိရပေးပါကွာ...။
တရွေ့ရွေ့ ဝေးကွာသွားတဲ့ လေယဉ်ရဲ့အဆုံးမှာ ကိုယ့်နှလုံးသားတွေပျက်သုဉ်းကြေမွရင်းက....
ကိုယ့်အချစ်ပန်းလေးတစ်ပွင့် ကျောက်အဖြစ် အသွင်ပြောင်းခဲ့ပြီ ကြွေရယ်........။
ကျွန်တော့်ရဲ့မဖြစ်ညစ်ကျယ်ဝထ္တုတိုလေးအတွက် အချိန်ကုန်ခံကာ တကူးတက ကူညီဒီဇိုင်းဆွဲပေးရှာသောယိမ်းနွဲ့ပါးမှ ကိုမိုးကြယ်အား အထူးပင် ကျေးဇူးဥပကာရ တင်ရှိပါကြောင်း။
စိတ်က ဆာနေတတ်တယ် ။ ။
ငါဝါသနာပါတာ ကဗျာ ။ ။
နင်းရင်းနဲ့ ပြားသွားတာလဲ နင်းပြားတွေဘ၀
ပဒိုင်းသီးတစ်လုံးလို ကဗျာကိုရူးတယ် ။ ။
ဒါဟာ ကဗျာ...။ ။
နက္ခတ်တို့ ညှိုးလို့ လရောင်မတိုးတောင်
အာ ဂုံ ဆောင် သွား မယ် ။ ။
ကျွန်တော့်အား အလွန်တရာမှပင် ခင်မင်ချင်ယောင်ဆောင်တတ်သော၊ ခိုင်းစရာရှိပါက မောင်လေးရေဟု အစပြုတတ်သော၊ ခိုင်းစရာမရှိလျှင် စကားပင်လေးလုံးပြည့်အောင် မပြောတတ်သော၊ ကျွန်တော့်အား မတွေ့ချင်မမြင်ချင်သူ စာရင်းတွင် နံပါတ်လေးနေရာတွင် ထည့်ထားသော၊ ကျွန်တော် မူး၍ရစ်သောအခါတွင် သည်းခံနားထောင်ပေးတတ်ရှာသော၊ ကျွန်တော့်အမအရင်းနှင့် မခြား ရိုသေလေးစားခင်မင်ရသော၊ တစ်ခါတစ်ခါ စိတ်ကောင်းဝင်လျှင် ထမင်းချက်ကျွေးတတ်သော(စိတ်ကောင်းကလည်း တစ်ခါဘဲ ၀င်တာပါ) အမအိန္ဒြာမှ တက်ဂ်သည့် ၀ါသနာဆိုသော ခေါင်းစဉ်အား ဤကဗျာလေးဖြင့် အကျွေးဆပ်အပ်ပါသည်။ မကြီးရေ ရေးပေးတာ နောက်ကျတာကို ခွှင့်လွှတ်ပေးစေချင်ပါတယ်နော်။ မကြီးကျေနပ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ရင်ခုန်သံ တချို့တ၀က်နဲ့ လတ်ဆတ်သန့်ရှင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ ပင်ယံထက်က ပန်းနဲ့လေပြေ..။
အနူးညံ့ဆုံးချစ်တတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ငါ့ရင်ခွင်ဘုံနန်းက စေတသိတ်ဆိုတဲ့ချပ်ဝတ်တွေ..။
သိပ်သည်းမှုအထပ်ထပ်နဲ့ ကမ္ဘာတည်သရွေ့မရပ်မဲ့ ငါ့ရင်ခုန်သံတေးထပ်တွေ...။
ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးမှာ ရှိသမျှ ရနံ့ပေါင်းစုံနဲ့မှ ငါလေ မင်းကို သင်းထုံယစ်စေခဲ့တာ..။
ဘ၀ဆိုတဲ့ ကြိုးတစ်ချောင်းမှာမှ သံယောဇဉ်ပိုးမျှင်တွေကို လွန်းတင်နေတတ်ခဲ့မိလေတော့...
ရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းကြောင့် ကျွန်တော် အသက်ရှုရပ်မတတ်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။
ဒီသတင်းတွေကို တဆင့်စကားတဆင့်နားနဲ့ ကြားသိခဲ့ရပေမယ့် ကျွန်တော်ယုံကြည်မှုမရှိခဲ့။
ယုံကြည်မှုမရှိခြင်းဆိုတာထက် ကိုယ့်ချစ်သူအပေါ် ယုံကြည်လွန်းတတ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်...။
ကဲ..ဘယ်လိုလဲလို့ သဘောရနေတဲ့ စိုးစံရဲ့ သေချာလွန်းတဲ့ မျက်ဝန်းတွေကို ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ဘို့..။
ချစ်သူကို သိပ်ယုံကြည်တတ်လွန်း သိပ်အထင်ကြီးတတ်လွန်းတဲ့ ဆူးရင့်ဆိုတဲ့ငါ..
မိုးခက်ရာ မင်းကြောင့်ငါ ဘယ်သူ့ကိုမှ မော်မကြည့်ရဲတော့ဘူး..။
အပေါင်းအသင်းတွေကြားမှာ ချစ်သူကို နည်းနည်းလေးတောင်မှ အထိမခံအပြောမခံခဲ့တဲ့ငါ..
ဆူးရင့်ဆိုတဲ့ကောင် သိပ်ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ မိုးခက်နွယ် အခုတော့ တစိမ်းယောကျာ်းတစ်ယောက်နဲ့ ပန်းခြံခုံတန်း လေးမှာ ကြည်နူးချစ်ကြည်စွာ ပွေ့ဖက်ကြည်စယ်နေ ကြတဲ့မြင်ကွင်းဟာ အရှင်လတ်လတ်ရင်ခွဲခံနေရသလိုပါဘဲ လား မိုးခက်ရယ်...။
ဘာကြောင့်များ ငါ့အပေါ်မှာ သစ္စာမဲ့ရတာလဲ...????
ဘယ်လိုနတ်ဆိုးတွေကများ မင်းကို စိတ်ဓါတ်အဆိုးတွေသွင်းပေးလိုက်တာလဲ...?????
ယောကျာ်းတစ်ယောက်ရဲ့ နှလုံးကွဲအက်သံကို လောကပါလနတ်တွေများ မကြားနိုင်လေရော့သလား...။
တမင်ဘဲ အသဲ(အသည်း)မာခဲ့တာလား..။ဒါမှမဟုတ် မထင်ဘဲခွဲခွာခဲ့တာလား...။
အခုလေ ငါ့ရင်ကွဲနာမှာ တသက်တာဆူးတွေနဲ့...။
ဒါနဲ့များတောင်ကွာ ဒါနဲ့များတောင် မင်းလုပ်ရက်တယ်နော် မိုးခက်နွယ်...။
ရူးသွပ်သွားတာလား...ဒါမှမဟုတ် ခူးဆွတ်ထားတဲ့ကောင်ကို ဦးညွှတ်သွားအောင် လုပ်ချင်တာလား..။
မမြင်နိုင်တဲ့ ခွန်အားတွေက တစ်ကိုယ်လုံးကို စီးဆင်းရင်း သွေးကြောအနှံ့ ဒေါသနဲ့ ခံပြင်းနာကျည်းခြင်းတွေ တောက်လောင်နေလိုက်တာ..။
လက်သီးနှစ်လုံးကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ကိုင်ရင်း ရှေ့ကိုလှမ်းထွက်ဘို့ ကျွန်တော်ခြေလှမ်းပြင်လိုက်မိတယ်..။
စိတ်မှာတော့ နာကျည်းခြင်း ရှက်ရွံ့ခြင်း ယူကြုံးမရဖြစ်ခြင်း လုပ်ရက်လေခြင်း အစရှိတဲ့ ခံစားမှုပေါင်းစုံက ပွဲခံနေ ကြလေရဲ့။
ရုတ်တရက် မြင်ကွင်းအစုံေ၀၀ါးလာတော့မှ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းမှာ မျက်ရည်တွေ လျှံတက်လာနေကြောင်း သတိထားမိလိုက်တယ်..။
ဒီကိစ္စကို ငါရှင်းရမယ်...ငါ့အပေါ်မှာ ဘာအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့များ မင်းရက်စက်သလဲ..။
ဒီအကြောင်းကို ငါ့ကိုရှင်းပြရမယ် မိုးခက်...။
ငါလက်ခံနိုင်လောက်အောင်ပေါ့...။ဒါပေမယ့် မိုးခက် ငါဘယ်တော့မှ လက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ...။
မုန်ယိုနေတဲ့ ဆင်ပေါက်တစ်ကောင်လို ဘယ်အရာကိုမှ ကျွန်တော် မမြင်နိုင်တော့..။
ထင်မှတ်မထားဘဲ တစစ်စစ်နာလာတဲ့ ဘယ်ဘက်ရင်အုံကိုလည်း ဂရုမထားနိုင်တော့..။
ဒီအချိန်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတဲ့ အရာဟာ ငါ့အတွက် အဆိုးဝါးဆုံးအရာတွေကို သယ်ဆောင်လာတော့မယ်ဆိုတာ အလိုလိုသိနေခဲ့မိတယ် မိုးခက်...။
တကယ်တော့ မင်းဟာ မာယာဖုံးထားတဲ့ သစ်တော်သီးတစ်လုံးပါလား မိုးခက်ရယ်...
ဆူးရင့်ဆိုတဲ့ကောင် သိပ်အချစ်ကြီးလွန်းမှန်းသိရက်နဲ့ မိုးခက်ရယ်...
အခုငါက မင်းရဲ့ဘယ်နှဖျာမြောက်သဲမှာ နစ်မြုပ်ခဲ့ရတဲ့ကောင်လဲ...။
ယောကျာ်းတစ်ယောက်ရဲ့ မာနနဲ့မှ မင်းက အလမ္ပယ်ပြတတ်တာလား မိုးခက်ရယ်...။
ငါ့ရင်တွေ ကျိုးအက်မှ မင်းဘ၀င်တွေ ပြိုးပြက်စေတာလား...????
ငါ့ရင်ရဲ့ အနိဌာရုံကိုမှ မင်းကခုံမင်သတဲ့လား...။
တစ်ချိန်က မင်းရဲ့အပြုံးဟာ ငါ့ဘ၀တစ်ခုလုံး သာယာမှုတွေဖူးလို့....။
အခု မင်းရဲ့အပြုံးမှာ ငါ့ရာသီတွေ တေးမဆိုတတ်တော့ဘူး မိုးခက်နွယ်...။
လည်ပင်းကြောတွေထောင်ထနေအောင် တင်းတင်းကြိတ်ထားတဲ့ အံတွေရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ဘ၀တစ်ခုပါတယ် မိုးခက်နွယ်...။
ရုတ်တရက်ဆုပ်ကိုင်လာတဲ့ စိုးစံရဲ့ လက်က ရုန်းထွက်ဖို့ကြိုးစားရင်း သူ့မျက်နှာကို ကြည့်လိုက်မိတော့ စာနာနား လည်မှု စိတ်မကောင်းဖြစ်မှုတွေနဲ့ စိုက်ကြည့်နေတဲ့ စိုးစံရဲ့မျက်ဝန်းတစ်စုံ..။
ငါမင်းကို သူငယ်ချင်းကောင်းပြီသစွာတားနေတာပါ..။ဒီပြသနာကို ဒေါသအလျောက်ဖြေရှင်းလိုက်ရင် နောက် ထပ်ပြင်မရတဲ့ အမှားတွေထပ်ဖြစ်လာနိုင်တယ် သူငယ်ချင်း..။
ငါ့စကားကို နားထောင်ပါကွာ..။ငါတို့ ပြန်ကြရအောင်..။
ငါရှက်တယ် စိုးစံ..။သူငယ်ချင်းတွေ ကြားမှာ ငါဘယ်လိုမျက်နှာပြရမလဲ။ ငါတို့ကို ချစ်သူတွေလို့ သိထားတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ငါဘယ်လိုမျက်နှာနဲ့ နေရမလဲ သူငယ်ချင်းရာ။
ငါ့ဘ၀တစ်သက်တာမှာ အကြီးမားဆုံး ဖောက်ဖျက်မှုတစ်ခုကို ခံလိုက်ရပြီစိုးစံ..။
ငါနားလည်ပါတယ် သူငယ်ချင်း..။ဒါပေမယ့် ဒါဟာ အဆိုးထဲက အကောင်းလို့မင်းမှတ်ယူလိုက်ပါကွာ။
သူ့အကြောင်းကို စောစောသိရတဲ့ အတွက် မင်းကံကောင်းတယ်လို့မှတ်ယူလိုက်ပါ။
မင်းကို သူငယ်ချင်းတွေက ဘယ်သူမှ လှောင်ပြောင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဆူးရင့် မင်းမမေ့ပါနဲ့ကွာ ငါတို့ဟာ သူငယ်ချင်းတွေပါ...။
စာနာမှုတွေအပြည့်နဲ့ ပြောနေတဲ့ စိုးစံရဲ့ မျက်နှာကို ကြည့်ရင်း တစ်စုံတစ်ခုကို ကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားခဲ့ တယ်။
ကျွန်တော်အမြတ်နိုးဆုံး အချစ်ရဆုံး ချစ်သူတစ်ယောက်ကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရပေမယ့် ကျွန်တော့်မှာ သူငယ်ချင်း ကောင်းတွေ ပိုင်ဆိုင်နေရသေးတယ်ဆိုတာကိုပေါ့...။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် စိုးစံ။ မင်းကိုသိပ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။
သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဓါတ်အပြည့်နဲ့ ပြောနေတဲ့ စိုးစံရဲ့မျက်နှာကို ကြည့်ရင်းကျွန်တော်သူ့ကို ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်ပါတယ်...။
တင်းကြပ်စွာ ကျွန်တော့်ပခုံးကို ဖြစ်ညှစ်လိုက်တဲ့ စိုးစံရဲ့လက်တွေမှာ သူငယ်ချင်းဆိုတဲ့ဓါတ်တွေ စီးဝင်နေတယ် ဆိုတာ ကျွန်တော်လေးလေးနက်နက်သိနေခဲ့တယ်...။
ရုတ်တရက်ခုန်ချသွားတဲ့ မျက်ရည်စက်လေးကိုကြည့်ရင်း ကျွန်တော် မချိပြုံးတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ရင်းက အဲဒီနေရာ ကနေ ကျွန်တော်တို့ လှည့်ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်..။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နောက်မှာတော့ မာယာဖုံးနေတဲ့သစ်တော်သီးတစ်လုံးကတော့ ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကို မေ့လျော့ရင်း ချစ်ခြင်းသံစဉ် အသစ်တစ်ပုဒ်ကို ခပ်တိုးတိုးလေး လွှင့်ထုတ်နေလိမ့်ဦးမယ် ဆိုတာ....။
သေချာတာကတော့ စိတ်မှာစူးတဲ့ ဆူးဆိုတာ တစ်သက်စာ နာနေလိမ့်ဦးမယ်ဆိုတာပါဘဲ...။
ဒီဆူးကို ငါမနုတ်တော့ဘူး မိုးခက်...။
ငါ့ကို ရူးသွပ်စေခဲ့တဲ့ ဆူးအနေနဲ့ ဘ၀တစ်သက်တာလုံး ငါမှတ်မှတ်သားသား စိုက်သွင်းထားလိုက်တော့မယ်...။
ချွေချခံလိုက်ရတဲ့ အမှောင်ထုကို လိုက်ကောက်ဖို့ကြိုးစားရင်း ...
တိတ်ဆိတ်မှုတွေက ငါ့တံခါးကို လာခေါက်နေကြပေါ့...
တကယ်ဆိုငါက မြောက်အရပ်ကိုမှ တောင်ဘက်ရွှေ့ချင်ခဲ့မိတာ..
တစ်ခါသာ ပစ်ချခဲ့လိုက်မိတဲ့ ရာဇ၀င်..
ငါ့လောကကို ၀င်ရောက်မွှေနှောက်သွားလိုက်ပုံများ ..
စိတ်ကူးစိတ်သန်းနဲ့ တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ တောင်တန်းတွေဟာလည်း ..
ကြေကွဲဖွယ်ရာ ပက်ကြားအက်တို့ရဲ့ စုပ်ယူစားသုံးခြင်းမှာ အပြိုပြိုအလဲလဲ ။ ။
တကယ်ဆို ငါကတိမ်တစ်စ ဖြစ်ချင်ခဲ့မိတာ...
လွတ်လပ်တယ် ပေါ့ပါးမယ် နေရာဒေသမရွေး ငါရွေ့လျားနိုင်တယ်...
မထင်မှတ်လိုက်ဘူး .. တကယ့်ကို မထင်မှတ်လိုက်ဘူး...ကံကြမ္မာသူခိုးရဲ့ ချောက်တွန်းမှုမှာ..
တစ်စုံတစ်ခုကို ရဘို့ တစ်စုံတစ်ရာထက်ပိုတဲ့ တန်ကြေးတွေပေးရမယ်မှန်းသိရင်..
ကွက်ကျားမိုးတို့ရဲ့ အထ္တုပတ္တိကို ငါပြင်ရေးချင်တယ်...
အစွမ်းအစတော့မရှိဘူး ဒါပေမယ့် တစ်လမ်းသွားခရီးတွေကို ငြီးငွေ့တတ်တဲ့ငါ..
အခု ဒီတစ်လမ်းကို ငါလှမ်းနေရပေါ့ ။ ။
ပြေးဝင်တိုးဝှေ့လာတဲ့ လေတစ်မျှင်ကိုမှ မက်မက်မောမောရှုရှိုက်မိခဲ့တဲ့ငါ ..
ပြင်ဆင်ခွင့်မရှိခြင်းတွေသာ အဲဒီနောက်မှာ ကပ်ပါလာမှန်း...
ဘယ်သူမှ မသိခဲ့ဘူး.. ကိုယ့်ရင်ကိုယ်ထုနေရတဲ့အဖြစ်တွေ...
ကိုယ့်ဆံပင်တောင် မြဲမြံအောင် မထိန်းသိမ်းနိုင်တော့တဲ့ ခန္ဓာမှာ..
မှားခဲ့ပါတယ်လို့ ၀န်ချတောင်းပန်ဖို့ထက် အဲဒီ့အမှားအတွက် ငါထမ်းလိုက်ရတဲ့ဝန်က...
ကံကြမ္မာတရားရေ.. ခင်ဗျားမတရားဘူးလို့မစွပ်စွဲချင်ဘူး ..
ငါကိုယ်တိုင်ကိုက ပျောက်ဆုံးမှန်းမသိ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာ...
ခက်ခက်ခဲခဲ ရှုထုတ်လိုက်တဲ့ လေရဲ့အဆုံးမှာ...
ငါကြိုးစားပြီး လှမ်းရဦးမယ် .. ခပ်ပျပျအဝေးတစ်နေရာက အမေ့ရဲ့ ခေါ်သံငါကြားလိုက်ရတယ်..
ဖြစ်ရလေခြင်းဆိုတဲ့ မချိတင်ကဲစိတ်...လက်လွတ်ဆုံးရှုံးရပြီဆိုတဲ့ အသိတွေနဲ့ ...
စိတ်အခါးတစ်ချို့ကို အမေ့ဆီကနေ သယ်ထုတ်သွားခွင့်ပြုပါတော့...
ဒီတံခါးကိုဘဲ ငါ....ဖြတ်သန်းသွားရတော့မယ် ။ ။
အေ အိုင် ဒီ အက်စ် တဲ့...ဘ၀များစွာကို သတ်ပစ်လိုက်တယ် ။ ။
တစ်နေ့တာကို ရေးရေးလေးပုံဖော်ကြည့်လိုက်တယ် ။ ။
ဒီညလေကိုလည်း ထိတ်လန့်မှုနဲ့ရှုတယ် ။ ။
ဝေခွဲရခက်မှု ထောင်သောင်းမကပါတယ် ။ ။
ကိုယ့်အရှုပ်ထုပ်နဲ့ ကိုယ်ထွေးလုံးရစ်ပတ်လို့ ။ ။
ကဗျာမရေးတတ်တော့ဘူး ။ ။
စိတ်မှာ အဖန်တစ်ရာမကသတ်လိုက်တယ် ။ ။
အထက်တွင်အသုံးပြုထားသောပုံကို pancam.astro.cornell.edu မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
မင်းလေ...သိပ်ညံ့တယ် ။ ။
ပစ္စုပန်မှာ ငါဟာအထီးကျန်နေတယ် ။ ။
ဒါပေမယ့် ငါ့မျက်စိနဲ့မဟုတ်ဘူး ။ ။
ငါ....ကြိုးစားရဦးမယ် ။ ။
အထက်တွင်အသုံးပြုထားသောပုံကို www.myfreewallpapers.net မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
Posted by Moe Myint Tane 13 comments
ပိတောက်တွေနဲ့ ပစ်ပစ်ပေါက်နေတတ်ရဲ့ ။ ။
အရိုးစွဲတဲ့ သတ်မှတ်ခြင်းဘောင်ကိုဖြိုချချင်နေခဲ့ပေါ့ ။ ။
မနက်ညစာတွေလည်း ပေါင်းစားနေတတ်ရဲ့ ။ ။
အသည်းခိုက်အောင် ကြိုက်နေပြန်သေးသတဲ့ ။ ။
ဆင်ခြင်တုံတရားတွေ လွှင့်ထုတ်နေတတ်ခဲ့ပြန်ပေါ့ ။ ။
အပွင့်အဖူးတွေနဲ့ ၀င့်ဝင့်ကြွားကြွားရူးချင်နေခဲ့သေးတယ် ။ ။
သူ့ကိုယ်သူ ပြန်သတ်လိုက်တယ် ။ ။
သင်္ခါရတဲ့ ဈာပနမှာမှထပွင့်တယ် ။ ။
အထက်တွင်အသုံးပြုထားသောပုံအား www.nzflowers.co.nz မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
ကျွန်ုပ် ဘလော့ခ်လောကသို့ စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့သည့် အချိန်မှစကာ ယနေ့အချိန်အထိ ကျွန်ုပ်နှင့်ခင်မင်ခဲ့ကြသော၊ ကျွန်ုပ်နှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးခြင်း မရှိသော်လည်း ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ပင် ကဗျာ စာပေရေးသားခြင်း ကိုဝါသနာထုံကြသော ကျွန်ုပ်နှင့်ရင်ဘတ်တူကြသော မိတ်ဆွေများအား ဖတ်ရှုကူညီ ဝေဖန် အကြံပြုနိုင်ခြင်းအလို့ငှာ ကျွန်ုပ်၏ မိတ်ဆွေ ၀ါသနာရှင်လူငယ်တစ်စု ကိုယ်စွမ်းဥာဏ်စွမ်းရှိသမျှ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသော contemporary art ဟုခေါ်ဆိုအပ်သော ခေတ်ပြိုင်စာစုလေး တစ်စောင်နှင့် ရင်ဘတ်တူ စာပေ၀ါသနာရှင်၊ မိတ်ဆွေများအား အခါအခွင့်သင့်ခြင်းအားလျော်စွာ မိတ်ဆက်ပေးလိုပါသည်။ ဤစာစုလေးအား စီစဉ်ထုတ်ဝေသူ ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေများမှ ရပ်ဝန်းသစ် ဟူ၍ အမည်နာမ မှည့်တွင်ထားကြပါသည်။ ထိုရပ်ဝန်းသစ်ခေတ်ပြိုင်စာစုလေးတွင် ၀ါသနာ၏စိတ်စေရာအရ ကျွန်ုပ်ရေးသားသော ရင်ဘတ်ကြိုးဟု ခေါ်တွင်သည့် မဖြစ်ညစ်ကျယ် ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်အားလည်း ကံအားလျော်စွာ ဖော်ပြခွင့် ရခဲ့ပါသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့်ပင် ကျွန်ုပ်နှင့် ရင်ဘတ်တူကြသော ကဗျာစာပေ ရေးသားခြင်းကို ၀ါသနာထုံကြ သော ကျွန်ုပ်မိတ်ဆွေများအား ဝေဖန်အကြံပြု ကူညီ ပါဝင်နိုင်စေခြင်းအလို့ငှာ ဤ ရပ်ဝန်းသစ်ခေတ်ပြိုင်စာစု လေးနှင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုပါသည်။ ဤစာစုလေး၏ဖွဲ့တည်ပုံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား အောက်တွင် တစ်ပါတည်း ပူးတွဲ ဖော်ပြပေးကာ ထိုစာစုလေးအား ဝေဖန်အကြံပြုကူညီ ပံ့ပိုးနိုင်စေခြင်းအလို့ငှာ ဒေါင်းလုပ်လင့်ခ်နှင့်တကွ လေးစားစွာ ဖော်ပြမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်။
စာပေအနုပညာ ၀ါသနာပါသော မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများသို့...
မိတ်ဆွေတို့၏ စာပေအနုပညာများကို စုစည်းဖတ်ရှုရန် အလို့ငှာ လစဉ်စာအုပ်တစ်အုပ်ကို အွန်လိုင်းဖြန့်ချိရန် ကျွနု်ပ်တို့ရည်ရွယ်နေပါသည်။ လစဉ်ပုံမှန်ထွက်ရှိနိုင်ရေးအတွက် စာမျက်နှာအရေအတွက်မှာ ကန့်သတ်မှုရှိနေ
ပါသည်။စာအုပ်မှာE-book အမျိုးအစား ဖြစ်၍ အခမဲ့ဖြန့်ချိပါမည်။ မိတ်ဆွေတို့၏ အနုပညာဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုကို လေးစားစွာ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
(၁) E-book အမျိုးအစား ရောင်စုံစာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။
(၂) အခမဲ့ online မှတဆင့်ဖြန့်ဝေပါမည်။
(၄) စာမျက်နှာ ကန့်သတ်ချက်ရှိပါသည်။
(၅) အခန်းကဏ္ဍ (၄)ခုပါဝင်ပါမည်။
(က) ကဗျာ ၅ ပုဒ်
(ခ) ကတွန်း ၁ ပုဒ်
(ဂ) ဆောင်းပါး ၁ ပုဒ်
(ဃ) ၀တ္ထုတို ၃ ပုဒ်
(၆) စာအုပ်၏ မျက်နှာဖုံးနှင့် မျက်နှာဖုံးပါခေါင်းစဉ်သည် စာပေ၀ါသနာရှင်များ တိုက်ဆိုင်ခံစားရေးသားနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ခေါင်းစဉ်နှင့် မတိုက်ဆိုင်သော ပုဂ္ဂလိက ခံစားချက်များကိုလည်း ရေးသားပေးပို့နိုင်ပါသည်။
(၇) နောက်လထွက်ရှိမည့် စာအုပ်၏ အဖုံးကို စာအုပ်၏နောက်ဆုံးစာမျက်နှာတွင် ကြည့်ရှူနိုင်ပါသည်။
(က) ကဗျာ၊ ကာတွန်း၊ ဆောင်းပါး၊ ၀တ္ထုတို စသည်တို့ကို မိတ်ဆွေတို့မှ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
(ခ) ကျွနု်ပ်တို့၏ E-mail (yatwonthit@gmail.com) သို့မြန်မာစာဖြင့်ရိုက်ပြီးပေးပို့ရပါမည်။
(ဂ) E-book ဖြစ်သည့်အတွက် ကာတွန်းများအားလုံး ကွန်ပျူတာဂရပ်ဖစ်ဖြင့် ပေးပို့ရပါမည်။
(၈) စာအုပ်၏ ခေါင်းစဉ်မှာ တစ်လတ်ကြိမ်ပြောင်းရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ ဖတ်ရှုသူများ မငြီးငွေစေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။
ပထမဆုံးထွက်ရှိလာသော ဇွန်လအတွက် ရပ်ဝန်းသစ်ခေတ်ပြိုင်စာစုကို ဤနေရာတွင် ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါသည်။ဤခေတ်ပြိုင်စာစုလေးအား မိတ်ဆွေတို့၏ တန်ဘိုးရှိသော အချိန်လေးများအား ဖဲ့ထွင်ကာ အချိန်ပေး ဖတ်ရှူခြင်းအတွက် ရပ်ဝန်းသစ် မှအထူးပင် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
ဆန္ဒမှန်သမျှကို ဆန့်ကျင်နေကြ ။ ။
ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ သဟဇာတတွေပါတယ် ။ ။
အတိတ်အနာ များစွာပါတယ် ။ ။
တစ်ချို့ဒသနတွေက စိတ်ဓါတ်ကိုအားဖြည့်နေကြပေါ့ ။ ။
ငါ့ရင်က တရိရိနဲ့နာလာတယ် ။ ။
အထက်တွင်အသုံးပြုထားသောပုံအား www.rocbike.com မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
အထင်ကရတွေလည်း ညမှာဖြစ်ခဲ့တယ် ။ ။
အက်သံတွေပါဝင်နေတာက ကံကြမ္မာလား ။ ။
နေ့တဓူဝဆိုတာ စက်ဆုပ်စရာတောင်ကောင်းလာတယ် ။ ။
ရင်လှိုက်နင့်အောင် နာတယ် ။ ။
အထက်တွင်အသုံးပြုထားသောပုံကို www.gamesetwatch.com မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
Posted by Moe Myint Tane 21 comments
သေမိန့်နှစ်ခါ ချခဲ့ဘူးတယ် ။
ငါ့ကဗျာတစ်ငုံစာလောက်တော့ သောက်ခွင့်ရချင်မပေါ့ ။
ငါ့ကောင်းကင်ဘုံက တဖြည်းဖြည်းရုပ်လုံးကြွလို့ ။
ကိုယ့်အလံ ကိုယ်ထူလိုက်စမ်းဘာ ။
သေချာတယ်.....မုဒိတာဟာ ပန်းမဖြစ်နိုင်ဘူး ။
လောကပါလအတွက် ကဗျာတစ်ပုဒ်ထားခဲ့မယ် ။
ခရာသံတွေရဲ့ ခွာရှပ်သံတွေလည်း ညံခဲ့ပြီ
ပြေးလမ်းတို့ရဲ့ စိန်ခေါ်ပွဲတွေလည်း စခဲ့ပြီ
ဆိုင်ကလုန်းလည်း ရခိုင်ထဲကို ဖြတ်ဝင်ခဲ့ပြီ
သေရည်အရက်ဆိုတာကို သောက်တတ်နေခဲ့ပြီ ။
လူတွေကြားမှာ လူပီသချင်သေးသပေါ့ ။
အံချလိုက်တဲ့ အနုပညာနဲ့ ငါ့ကောင်းကင်မှေးစက်ဘို့
ငါ့ ကဗျာပန်းတွေက ပွင့်လန်းနေမြဲဘဲ ။
ကိုင်းမြဲကိုင်းဆဲ ညွှတ်မြဲညွှတ်နေရဆဲဘဲ ။
ငါ....သိပ်စိတ်နာတယ် သူငယ်ချင်း ။
ကျွန်ုပ်၏ ဘလော့ခ်ဘန်နာလေးအတွက် မအားလပ်သည့်ကြားမှ တကူးတက အချိန်ယူကာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲကူညီပေးသော ယိမ်းနွဲ့ပါးမှ ကိုမိုးကြယ်အား ဤကဗျာလေးနှင့်အတူ အထူးပင် လေးနက် လှိုက်လှဲစွာ ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း။
တရေးနိုးထဆိုတတ်တဲ့တယောသံမှာ ညဟာငိုပြန်တယ် ။
အစစ်ယောင် ဆောင်လိုက်တာများလား ။
မျှော်လင့်ခြင်းတစ်ခက် ရဲရဲတောက်တိုးထွက်နေပြန်ပေါ့ ။
ကိုယ် ကိုယ်တိုင် အဆိပ်တက်ခဲ့တော့
အထက်တွင် အသုံးပြုထားသောပုံကို www.wowinsider.com မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
ကံကြမ္မာက ခါးသက်လွန်းတယ် ။
တိုက်စားခြင်း လေးညှို့တင်သံတွေပဲ့တင်ထပ်လို့ပေါ့ ။
ဒါ..မင်းပေးတဲ့ သင်ခန်းစာတွေပေါ့ ။
အထက်တွင်အသုံးပြုထားသောပုံကို www.flickr.com မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
တည်ငြိမ်ညိမ်းအေးခြင်းနဲ့ မိတ်ဆွေဖွဲ့လို့ ။
စိတ်ဟာ တူရွင်းတစ်လက် ဆောက်တစ်ချောင်းဖြစ်မယ် ။
တို့တွေ ရပ်လိုက်ကြရအောင် ။
အထက်တွင်အသုံးပြုထားသောပုံကို www.myspace.com မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
သူဟာ အဓိပတိတစ်ပါးလည်း ဖြစ်လိမ့်မယ်
ကဗျာတွေနဲ့လည်း ပျော်ပါးခဲ့ဘူးတယ် ။
တပ်မက်မှုမဏ္ဍိုင်မှာ ကဗျာပန်းတွေလှိုင်လှိုင်ပွင့်တယ် ။
အရာရာကို ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ မိုင်တိုင်လေးဆယ်ကျော်မှာ
ဘ၀ကို ရင့်ကျက်မှုနဲ့ မောင်းနှင်ရင်း
နေ့သစ်တွေကို ကျော်လွန်ဖြတ်သန်းမယ့် "သူ"
ကျွန်တော့်ရဲ့အကိုအရင်းလိုလည်းဖြစ် ဆရာဆိုလည်း မမှားတဲ့ အကိုမင်းသုခရဲ့ မွေးနေ့မှာ ဒီကဗျာလေးကို မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် အမှတ်တရ တင်လိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ အကိုရေ မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများ
စွာအထိ ပျော်ရွင်ချမ်းမြေ့မှု အပေါင်းခညောင်းပါစေလို့ မွေးနေ့ဆုမွန်တောင်းလိုက်ပါတယ် အကို။
ဘ၀ဆိုတာကို ထုတ်ခြင်းဖောက်အောင် စူးနစ်ဝင်ခဲ့တယ် ။
အရာတစ်ခုဟာ မြဲမြံနေခဲ့တယ် ။
အတိတ် ပစ္စုပန် အနာဂတ်
နယူတန်ရဲ့နိယာမတွေ ရိုက်ချိုးခံခဲ့ရလို့ပေါ့ ။
ကောင်းကင်က လမသာဘူး ။
အထက်တွင်အသုံးပြုထားသောပုံကို www.awesomeclipartforeducators.com မှကူးယူဖော်ပြပါသည်။
စကားချီး ။ ။
တနေ့သ၌ ကျွန်ုပ်သည်လုပ်ငန်းခွင်၌တက်ကြွစွာ ငိုက်မျဉ်းနေလျက်ရှိလေ၏။ သို့သော် ကြာရှည်စွာ ငိုက်မျဉ်းနိုင်ခြင်းကား မစွမ်းသာပေ။ အဘယ်အတွက်မူ ကျွန်ုပ်၏ အလုပ်ရှင်သူဌေးရောက်ရှိလာသဖြင့် လွန်စွာမှပင် အားထုတ်၍ အလုပ်လုပ်နေသယောင် ဟန်ဆောင်ထားရပေသည်။ သို့သော်လည်းကမ္ဘာပေါ်၌ အလေးဆုံးအရာသည် မျက်ခွံဖြစ်ရကား ကျွန်ုပ်မှာ အိနြေ္ဒမဆည်နိုင်လောက်အောင်ပင် ပျက်ရွင်းနေလေ၏။ ထိုသို့ ယိုင်လဲလုနီးနီးဖြစ်နေသာ ကျွန်ုပ်၏အခြေအနေအား ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ကျွန်ုပ်၏အာရုံတို့အား လွှဲပြောင်းရန် သူဌေးအလစ်၌ ကျွန်ုပ်၏ကောင်းကင်လေးရှိရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့လေ၏။
ထိုသို့ရောက်ရှိလျှင် ရောက်ရှိခြင်း စီဘုံးဟုခေါ်တွင်သော ကျွန်ုပ်မိတ်ဆွေများ၏ မှတ်တမ်းများ သိမ်းဆည်းရာ ပြတိုက်လေး၌ အသစ်စက်စက် မှတ်တမ်းလေးတစ်စောင်အား အမှတ်မထင်တွေ့လိုက်ရလေတော့၏။ ထိုမှတ်တမ်းလေးမှာ ကျွန်ုပ်လွန်စွာမှပင် ခင်မင်လှ၍ ကျွန်ုပ်အားလည်း လွန်စွာမှပင် ခင်မင်ကြသော ကျွန်ုပ်နှင့် ပြောမနာ ဆိုမနာ မိတ်ဆွေရင်းချာများသဖွယ် ဖြစ်ကြသည့် ကိုရင်နော်နှင့် မခင်လေးငယ်တို့ ၏ မှတ်တမ်းပင် ဖြစ်လေတော့သည်။ ထိုမှတ်တမ်းတွင် ပါဝင်သော အကြောင်းအရာကို ဖတ်ရှုမိသည့်ခဏ၌ပင် ကျွန်ုပ်ရင်ဘတ်သို့ လော်ရီကား တက်ကြိတ်သည့်နှယ် အသက်ရှုကျပ်သွားလေတော့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဟူမူ မှတ်တမ်း၌
"ချစ်ခြင်းဗလပွဖြင့် TAG တော်မူ၏ ဟဲ ဟဲ..."
ဆိုသောစာမှာ ကျွန်ုပ်အား များစွာ အသက်ရှုကျပ်စေလေ၏။ အဘယ်အကြောင်းအရာများကို ရေးသားရန် ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေကြီးများ တက်ဂ်ပါသနည်း။ ပြင်းပြလာသော သိချင်စိတ်များအား မမျိုသိပ်နိုင်တော့သောကြောင့် ချက်ခြင်းလိုပင် အနှီမိတ်ဆွေကြီးများရှိရာ အိမ်ဂေဟာသို့ တက်သုတ်ရိုက် ချီတက်ခဲ့လေတော့သည်။ အိမ်သို့ရောက်လတ်သော် အကြိမ်ကြိမ် အခါခါ အသံပြု ခေါ်ငင်ပါသော်လည်း မည်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ ထွက်လာခြင်းငှာ မတွေ့ရှိရသဖြင့် ကျွန်ုပ်သည်လည်း တတ်သည့်ပညာ မနေသာသည့်အလျောက် ကျွန်ုပ်၏ပညာဖြင့်ပင် ယင်းမိတ်ဆွေကြီးတို့၏ တံခါးကိုဖွင့်ကာ ၀င်ရောက်ခဲ့လေတော့သည်။
ထိုသို့ ၀င်ရောက်သည်ဆိုခြင်း၌ ကျွန်ုပ်အနေနှင့် မည်သို့သော ပစ္စည်းတစ်စွန်းတစ်စမှ ခိုးယူလိုသော စိတ်မရှိဘဲ မည်သည့်အကြောင်းအရာအားတက်ခ်သည် ဆိုသော သိချင်စိတ်တစ်ခုတည်းသာ ရှိသည်ဆိုသည်ကိုမူ ကျွန်ုပ်နှင့် လွန်စွာရင်းနှီးခင်မင်ကြသော ကျွန်ုပ်၏ မိတ်ဆွေကြီးများ သိလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်မိလေ၏။ ထိုသို့ တွန်းဖွင့် ၀င်ရောက်ရင်း အနှီမိတ်ဆွေကြီးများ၏ တက်ခ်ကို ရှာဖွေဖတ်ရှုရာ ယခင့်ယခင် ရေးသားထားသော အဟောင်းများအား ပြန်လည်ဆန်းသစ်ရန် တက်ခ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းကို သိရှိရလေ၏။ သို့မှသာလျှင် ကျွန်ုပ်လည်း အနည်းငယ် စိတ်အေးရလေတော့၏။ ထို့အတွက်ကြောင့်ပင် ကျွန်ုပ်လည်း ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေကြီးများနှင့် ကျွန်ုပ်လေးစားရသော စာဖတ်သူ၊ ဘလော့ခ်ဂါမောင်နှမများအား ပြန်လည် တင်ပြနိုင်ရန်အလို့ငှာ စဉ်းစားခန်းဝင်ရလေတော့၏။
ကျွန်ုပ်မှာ ကဗျာရေးသားသော ဘက်၌အားသန်သူဖြစ်သည့်အလျောက် ရေးခဲ့ဘူးသော ကဗျာများစွာရှိလေ၏။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ကဗျာများမှာ ဖတ်ရှုသူများအတွက် စိတ်အပန်းပြေစရာ နည်းပါးလှသည် ဖြစ်သည့်အလျောက် ကျွန်ုပ်မှာလွန်စွာမှပင် အားနာခြင်းဖြစ်မိလေ၏။ ထို့အတွက်ကြောင့်ပင် ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် စိတ်ကူးဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့သော အိမ်လေးတစ်လုံးနှင့် ကျွန်ုပ် ဂျီတီအိုင်ကျောင်းသားဘ၀ ကိုယ်တွေ့ကြုံဆုံခဲ့ရသော ရီမောဖွယ်ရာ အမှတ်တရ အဖြစ်လေးတစ်ခုအား ဒုတိယအကြိမ် ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ် မိတ်ဆွေကြီးများ၏ တက်ဂ်ကို ရေးသားလိုက်ရပါကြောင်း။၊
အခမ်းနားဆုံး အလှတရားတွေနဲ့ ဖွဲတည်ရင်း
အမြတ်နိုးဆုံး သီကျူးတဲ့ ချစ်ခြင်းသံစဉ်တွေကြား
အထက်တွင်အသုံးပြုထားသောပုံကို www.homeplaninfo.com ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
အဲဒီနေ့က ကျွန်တော်ကျောင်းသွားတုန်း တွေ့ကြုံရတဲ့အလွဲလေးတစ်ခုပေါ့။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ကျွန်တော်က အင်းစိန်မှာ GTI မှာ ပထမနှစ်တက်ခါစ။ ကျောင်းဖွင့်တာ ၃လလောက်ဘဲ ရှိသေးတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီနေ့က ဘယ်လိုအိပ်ချင်မှန်းကို မသိဘူး။ ကျွန်တော်လည်းအိပ်ချင်တဲ့ မျက်လုံးကိုအတင်းပြူးပြီး အိမ်ကထွက်လာခဲ့တယ်။ ရာသီဥတုကလည်း တော်တော်ပူတာ။ မြေနီကုန်းကားဂိတ်မှာ ကားစောင့်နေရင်း ပူပြင်းလှတဲ့နေမင်းကို ရန်လုပ်နေသေးတယ်။ ၁၀မိနစ်လောက်ကြာတော့ ၄၅aricon-busကြီးရောက်လာပါကော။ ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်း ကားနား ပြေးသွားပြီး ကားပေါ်တက်လိုက်ပါတယ်။ ကျေးဇူးရှင် စပယ်ယာကလည်း အတင်းတွန်းတင်နေတာ။ တော်တော်မလွယ်ဘူးဗျာ။
ကျွန်တော့် လက်ထဲမှာ Tကပါသေးတယ်လေ။ ကျောပိုးအိတ်ကဖက်၊ ဒီကြားထဲ ကျေးဇူးရှင်က အတင်းတွန်းတင်တော့ စိတ်ထဲကနေ မေတ္တာပို့လိုက်သေးတယ်။ ဒါနဲ့ကားပေါ်ရောက်တော့ ထိုင်စရာလေးများ ရနိုင်မလားလို့ မျက်စိကလေးကစားလိုက်တယ်။ တွေ့ပါပြီဗျာ ဟိုးနောက်ဆုံးတန်းမှာ။ ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်း သူများမထိုင်ခင် ကဗျာကယာ ပြေးဦးလိုက်တာပေါ့။
"ဟဲ့ ဟဲ့ ဘယ်လိုလုပ်တာလဲ..."
"ဟာ" "ကတော့နော် အမ ဆောရီး.."
ကျွန်တော်တောင်းပန်တာတောင် သူကမျက်ထောင့်နီကြီးနဲ့ ကြည့်တုန်း။ သူစိတ်ဆိုးမယ် ဆိုလဲဆိုးချင်စရာပါဘဲ။ ကျွန်တော်က နေရာရလိုဇောနဲ့ အပြေးလေးသွားတော့ လက်ထဲကTကို ခဏမေ့သွားတယ်၊ အဲဒီမှာတင် Tတံခေါင်းက အဲဒီအမကြီးလက်ကို ချိတ်မိပြီး ကျွန်တော်သွားတဲ့နောက် ကိုသူကယိုင်ပြီးတော့ ပါလာတာ။ သူ့ကြည့်ရတာလဲ တော်တော်နာသွားတဲ့ ပုံဘဲ။ ကျွန်တော်လည်း ဆောရီးပြောပြီး အသာလေးလစ်ထွက် လာလိုက်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်လည်း နောက်ဆုံးတန်းက ခုံမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။ မကြာပါဘူး စပယ်ယာ ကားခလာကောက်တာနဲ့ ပိုက်ဆံထုတ်ပေးလိုက်ပြီး လွယ်အိတ်လေး ပေါင်ပေါ်တင် Tတံကို ဒူးနှစ်ဖက်နဲ့ ညှပ်ပြီး စငိုက်တော့တာပေါ့။ မဟာမြိုင်မှတ်တိုင် ရောက်တော့ ကျွန်တော့်ဘေးက တစ်ယောက်ဆင်းသွားပြီး အသက်၅၅ ၆၀ လောက်ရှိတဲ့မိန်းမကြီး တစ်ယောက်ဘေးကို ၀င်ထိုင်လိုက်တာ သိလိုက်တယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ငိုက်ရင်းကနေ မှေးကနဲ အိပ်ပျော်သွားတယ်။
"မီးတွေ မီးတွေ ကားနောက်မှာ မီးလောင်နေပြီ"
"စပယ်ယာ ကားနောက်မှာ မီးလောင်နေပြီ"
ဆိုတဲ့ ကျွန်တော့်ဘေးက မိန်းမကြီး စူးစူးဝါးဝါး အော်သံကြားမှ ဆတ်ကနဲ လန့်နိုးသွားတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ နောက်လှည့်ကြည့် လိုက်တော့ ကားနောက်မှာ မီးခိုးလုံးကြီးတွေက အူထွက်လာတာ တွေ့လိုက်ရတယ်။ ဒီမှာတင် ကျွန်တော့်ဘေးက မိန်းမကြီးက ဘာမပြော ညာမပြောနဲ့ ထပြေးတော့တာဘဲ။ ကျွန်တော်လည်း ဘယ်ရလိမ့်မလဲ ပေါင်ပေါ်တင်ထားတဲ့ ကျောပိုးအိတ်ကို ဇတ်ကနဲ ကောက်လွယ် Tကို လက်တစ်ဖက်က ကိုင်ပြီးပြေးတော့တာပေါ့။ ဟိုမိန်းမကြီးက ရှေ့က ကျွန်တော်က နောက်ကပေါ့။ ကားပေါ်မှာလည်း ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ကြောင့် ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဖြစ်ကုန်တာပေါ့။ အဲဒီမှာတင် စပယ်ယာက
"ဟာ ဘယ်လိုဖြစ်လို့ လျှောက်ပြေးနေတာတုန်း မီးလောင်တာ မဟုတ်ဘူးဗျ။ အင်ဂျင်ကျနေလို့ မီးခိုးအလုံးလိုက် ထွက်နေတာ"
"မသိဘူးလေတော် မီးခိုးတွေအများကြီး ထွက်တော့ ကျူပ်ကမီးလောင်တယ်ထင်လို့ပေါ့.."
လို့ ပြောပြောဆိုဆို နဲ့ ဘာမှမဖြစ်သလိုနဲ့ သူ့နေရာသူ ပြန်သွားထိုင်နေလေရဲ့။ ကျွန်တော့် မှာတော့ ဘာလုပ်လို့ လုပ်ရမှန်းကို မသိတော့ဘူး။ အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ သူ့နောက်ကလိုက်ပြေး မိတာကိုး။ တစ်ကားလုံးကလည်း ပြူံးစိစိနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကို ၀ိုင်းကြည့် နေကြလေရဲ့။ တစ်ချိူ့မထိန်းနိုင်တဲ့ သူတွေဆို အသံထွက်ပြီးတောင် ရီနေလေရဲ့။ ဟိုမိန်းမကြီးကတော့ ဘာမှမဖြစ်သလို သွားထိုင်နေနိုင်ပေမယ့် ကျွန်တော်မှာတော့ ရှက်လွန်းလို့ နီးစပ်ရာ မှတ်တိုင်မှာ ဆင်းပြီးနောက်ကား ပြောင်းစီးခဲ့ရပါကော။
Posted by Moe Myint Tane 15 comments